Suudaan waa dalkii ugu horeeyey ee Bariga Dhexe ee qaata tallaalka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Suudaan » Suudaan waa dalkii ugu horeeyey ee Bariga Dhexe ee qaata tallaalka COVID-19
Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Suudaan • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Suudaan ayaa noqotay wadankii ugu horeeyey ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee qaata tallaalka COVID-19 iyadoo loo sii marinayo xarunta COVAX.
Qiyaasaha ugu horeeya waxay aadi doonaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka ka weyn 45 oo qaba xaalado caafimaad oo daba dheeraada.
Gaarsiinta ayaa timid kadib markii ay yimaadeen 4.5 metrik ton oo saliingado iyo sanaadiiqda badbaadada, oo qayb ka ah keydka caalamiga ee ay maal-gasho iyo taageertay shirkadda Gavi ee ay UNICEF gaarsiisay iyada oo ka wakiil ah Xarunta COVAX.
Wasiirka Caafimaadka ee Suudaan wuxuu ku boorinayaa dadka xaqa u leh inay isdiiwaangaliyaan oo la talaalo isla marka ay helaan balan.
Suudaan waxay heshay in ka badan 800,000 oo qiyaaso ah oo ah tallaalka COVID-19 ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika (MENA) ee ay bixiso AstraZeneca. Tallaallada waxaa lagu gaarsiiyey taageerada UNICEF iyada oo loo sii mariyey COVAX, oo ah isbahaysi ay wadajir u wada hoggaaminayaan Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Gavi, Global Vaccines Alliance, iyo Isbahaysiga Ka Hortagga Cudurrada Cudurrada (CEPI), oo hubiya in si siman loo qaybiyo COVID-19 tallaalada dalalka iyadoon loo eegin dakhliga soo gala.
Gaarsiinta ayaa daba socota imaatinka 4.5 metrik ton oo siriinjo iyo sanaadiiqda badbaadada, oo qeyb ka ah keydka caalamiga ee Gavi-maal galisay isla markaana taageertay oo ay UNICEF gaarsiisay iyadoo ku mataleysa xarunta COVAX Jimcihii la soo dhaafay, Febraayo 26, 2021, oo muhiim u ah tallaalka badbaadada leh ah Bariga Dhexe. WHO waxay la shaqeysay mas'uuliyiinta qaranka sidii loo dejin lahaa istaraatiijiyad tallaal oo ay ka mid tahay tababaridda tallaalka, hubinta badbaadada tallaalka, iyo kormeerka waxyeelada xun.
Shixnadaha ugu horreeya ee tallaallada maanta la helay waxay taageeri doonaan tallaalka shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka ka sarreeya 45 oo qaba xaalado caafimaad oo daba-dheeraada, oo ku nool aagagga fiditaanku aad u sarreeyo ama la filayo in la kala qaado sare, taas oo calaamadeynaysa wejiga koowaad ee ololaha tallaalka dalka oo dhan.
Adiga oo tallaala shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Suudaan marka hore, waxay sii wadi karaan bixinta adeegyo naf-badbaadin ah waxayna ilaalin karaan nidaam daryeel caafimaad oo shaqeynaya. Waa muhiim in shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee ilaaliya nolosha dadka kale la ilaaliyo marka hore.
Dr. Omer Mohamed Elnagieb, Wasiirka Caafimaadka ee Suudaan, wuxuu qaddariyay dhammaan la-hawlgalayaashii ka wada shaqeeyay in Suudaan ay noqoto waddankii ugu horreeyay ee gobolka oo dhan ka qaata tallaalka COVID-19 iyada oo loo marayo Xarunta COVAX.
"Tallaalladu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xakamaynta faafitaanka cudurka ee Suudaan ugu dambayntiina ku soo laabanaya sidii caadiga ahayd," ayuu yiri Dr. Omer Mohamed Elnagieb. Wuxuu ku booriyay kuwa xaqa u leh inay isdiiwaangaliyaan oo la talaalo isla marka ay helaan balan.
Caalamka iyo Suudaan, COVID-19 wuxuu carqaladeeyey gaarsiinta adeegyada muhiimka ah wuxuuna sii wadaa dhimashada dadka iyo carqaladeynta habnololeedka. Laga soo bilaabo 1-da Maarso 2021, Suudaan waxaa la xaqiijiyay in ka badan 28,505 kiis oo la xaqiijiyay oo ah COVID-19 iyo 1,892 dhimasho la xiriirta, tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay ee wanaagsan ee COVID-19 lagu dhawaaqay Maarso 13, 2020.
“Tani waa war weyn. Iyadoo loo marayo Xarunta COVAX, Gavi wuxuu hubiyaa in waddammada oo dhami ay leeyihiin fursad loo siman yahay oo lagu heli karo tallaalladan naf-badbaadinta ah. Waxaan sii wadeynaa inaan ka shaqeyno inaan cidna uga harin tallaalka, ”ayay tiri Jamilya Sherova, oo ah Maamulaha Sare ee Suudaan ee Gavi, Isbahaysiga Tallaalka.
"Rajada aan ka qabno in aan ka soo kabano aafada faafa waa tallaalada," Abdullah Fadil, Wakiilka UNICEF Sudan, ayaa sidaas xaqiijiyey. "Tallaalada waxay yareeyeen aafada cuduro fara badan oo faafa, waxay badbaadiyeen malaayiin dad ah waxayna si wax ku ool ah u baabi'iyeen cuduro badan oo nafta halis galiyay," ayuu sii raaciyay.
Dr. Nima Saciid Caabid, Wakiilka Ururka Caafimaadka Adduunka ee Suudaan, ayaa xaqiijisay in talaalada maanta la helay ay yihiin kuwo amaan ah oo lagu ansixiyay Habka Liiska Isticmaalka Degdega ah ee WHO si loogu isticmaalo Suudaan iyo dalal kale. Wuxuu ku bogaadiyay dowladda Suudaan, Wasaaradda Caafimaadka ee Federaalka iyo la-hawlgalayaasheeda guusha weyn ee xaqiijineysa in dadka reer Suudaan laga ilaaliyo cudurka halista ah ee wali ku sii faafaya.
“Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ku faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo taariikhdan loogu talagalay jawaabta COVID-19 ee Suudaan. Tallaalladu waa ay shaqeeyaan oo talaalku waa in loo wada ahaadaa dhammaan, ”ayay ku nuuxnuuxsatay Dr. Nima. "Laakiin waa inaan marwalba xusuusnaano in talaalku uu kaliya u shaqeeyo qayb ka mid ah hanaan dhameystiran - waxay yihiin hal qalab oo kaliya oo ka mid ah qalabkeena ka hortaga fayraska waxayna waxtar badan leeyihiin marka la isku daro dhamaan caafimaadka bulshada iyo xeeladaha ka hortagga shaqsiyadeed."
Taageerada Gavi, UNICEF iyo WHO waxay ku taageeri doonaan Dowladda Suudaan sidii loo bilaabi lahaa ololaha tallaalka iyo abaabulka tallaallo tallaal oo waddanka oo dhan ah si loo gaarsiiyo dhammaan dadka u qalma tallaallada.